Kadịnal bukwa ezigbo enyi Francis na-enweta 35.000 Euros n'ọnwa-gloria.tv
ig.news  Dis 22, 2017
Kadịnal bukwa ezigbo enyi Francis na-enweta 35.000 Euros n'ọnwa
Onye first councilor nke Pope Francis, Kadịnal Oscar Rodríguez Maradiaga, 75, na ezi ozi ọma ogbenye mana ọ na enweta 500.000 Euros kwa afọ site na Mahadum Katọlik nke Tegucigalpa, Honduras, ka ọ dere bụ L’Espresso(December 21) nke Italy. Rodríguez bụ onye nhazi Council of Cardinals nke Francis.
Site na L’Espresso Pope Francis ma maka ihe kamgbe ọnwa May. Na December Rodríguez nwetara 54.000 Euros (64,200 dollars) n'elu ya ọzọ. Rodríguez nwetara ego afọ iri mgbe ọ bụ Grant Chancellor nke mahadum ahụ.
Ọtụtụ ndị aka ebe boro Rodríguez ị ị nwe akụ na ụba na London karịrị 1,2 million dollars nke mechara funyụọ anya. Francis tinyere ultraliberal bishọp Argentina Jorge Pedro Casaretto, 80, n'isi nnyocha.
Rodríguez nke ndị ozi akụkọ nkịtị hụrụ n'anya bụ otu n'ime ndị isi nkwado “ndozigharị” nke Pope Francis.
Foto: Oscar Rodríguez Maradiaga, © Gabriele Merk, CC BY-SA, #newsIlooloamvl
ig.news kwụrụ maka ozi a na L’Espresso ebidogharịala ebubo megide Kadịnal Rodríguez  Feb 8, 2018
42  Epr 8, 2018
34  Epr 8, 2018
27  Epr 8, 2018
38  Epr 7, 2018
28  Epr 6, 2018
36  Epr 6, 2018
38  Epr 6, 2018
29  Epr 6, 2018